Zvakakomba ... Sei Uri? | Martech Zone
Zvakakomba… Sei Uri?
Chipiri, Gunyana 4, 2011 Svondo, November 20, 2011 Douglas Karr
Isu tinoshanda nevatengi vane ruzivo rwakanyanya basa redu rakawanda harisi rakaoma… zviri kungoedza kutarisisa vatengi vedu, kukoshesa basa ravo, uye kuita pamazano akagadzirwa.
Nei uri kurasa mari yakawanda mumishandirapfupi-yenguva panzvimbo pekudyara muzvirongwa zvenguva refu?
Nei uri kutarisira kuwedzera kutengesa iwe usati wawedzera zvakaenzana kushambadzira kwako kwekudyara?
Sei uchiri kuchengeta vashandi vanotengesa pamubhadharo ivo vasiri kuvhara vatungamiriri vanokodzera?
Nei urikugadzira mhinduro dzemukati kana iwe uchigona kuenda uchitenga zvakachipa, nekukurumidza uye zvirinani?
Nei uri kuyedza kukudziridza zvimwe zvinhu kana iwe uri kurasikirwa nevatengi pane izvo zvisingashande?
Nei urikutenga zvakachipa, uchiziva kuti yako mhando haina kudhura?
Nei iwe uchiri kubhadhara mumwe munhu kugadzirisa yako saiti kana zvemukati manejimendi masisitimu ari kudhura?
Nei uchiri kuita bhizimusi nesangano rimwe chete risingakwanise kuratidza yavo ROI?
Sei uri kuisa mari mumushandirapamwe mutsva iwe usina kubvumira yekupedzisira kuti ipedze?
Sei uri kupa mubayiro vatsva vatengi uye kwete avo vanga vainewe kwenguva yakareba?
Nei uri kubhadhara mubhadharo wega wega kana usiri kusefa zvisina kunaka mazwi akakosha kana kana kuyedza akasiyana mavhezheni ako ekushambadzira kana mapeji ekumhara?
Nei uri kutenga webhusaiti nyowani isingasanganise nhare, dzekutsvaga uye dzekushandura nzira?
Nei urikubhadhara kusimudzira yako saiti kana isina kugadzirirwa kutsvaga?
Nei urikutsvaga saiti nyowani iwe usati wambotora mukana weiyo yekupedzisira?
Sei uchishambadza pane mamwe masaiti iwe usina mavhidhiyo uri wega?
Nei urikuedza kuyera pamazwi akakosha iwe ausingazombomira pazviri uye nekuregeredza iwo marefu-muswe aunogona?
Nei urikusarudza mazwi akakosha anotyaira zviuru zvevashanyi apo zvese zvaunoda zviri zvishoma?
Sei urikuyedza kuronga nyika yose riinhi hauna chinzvimbo munharaunda?
Nei uri kuyedza kurongedza zvirinani pane mazwi akakosha asingachinjike mukutengesa?
Sei uri kuongorora analytics vhiki yega yega kana iwe usati waisa zviitiko, zvinangwa, kutendeuka kuteedzera, ecommerce kusangana kana kutengesa mafelni?
Nei uri kuda kukwira mukati mezvenhau kana iwe uchiziva kuti haufarire kugara?
Nei uri kushambadzira paTwitter kana yako saiti isiri kushandura vashanyi?
Sei uri kutsvaga vatsva vatsva asi vazhinji vari kuzvinyoresa kubva kuemail yako?
Sei uri kutumira crappy yako pavhiki email panzvimbo yekutumira zvisingaite pamwedzi email inotyaira mhedzisiro chaiyo?
Sei urikushambadzira paFacebook iwe usina email yekurera chirongwa?
Sei iwe uchibloga pane domain iwe yausiri yako ... kugadzira kukosha uye chiremera chechimwe chinhu chausingazombobatsirwa nacho?
Nei iwe uchiblogi uye usiri kusimudzira zvemukati zvawakapedza nguva yakawandisa uchinyora?
Nei uri kushanda pakutangazve? Makuru mabasa haatombouya kubva kuendesa kutangazve?
Sei uchienda kunoshanda mazuva ese uchitya zvaunoita pane kurega uye kuita zvaunoda?
Sei uri pa Twitter ne Facebook uye usiri kubloga?
Nei uri kutanga chirongwa cheemail kana yako saiti isiri kushanda?
Sei uchinetseka nezve bounce rate kana iwe usina kana chinhu pane yako saiti yekuchengeta vanhu vachiita?
Sei iwe uchinyora zvimwe zvemukati iwe usina kana pikicha yako pachako pane yako saiti kuti vanhu vazive kuti ndiwe ani?
Sei iwe uchinyora hombe zvemukati uye uchizviratidza pane saiti iwe yaunovenga?
Sei uri kutambisa nguva kufunga nezve chinhu chikuru chinotevera pachinzvimbo chekugona izvo zvaunazvo?
Sei urikuedza kuzviita wega wega pane kuwana rubatsiro?
Ini ndinowanzo kuseka nevanhu kuti ini ndiri wezvemagariro murairidzi wezano asi ini kashoma kuwana mukana wekubvunza nevanhu nezve social media Ichokwadi chaizvo, zvakadaro. Nhasi mumwe wevatengi vedu achangotanga peji reFacebook kukambani yavo… Mwedzi mitanhatu mushure takatanga kushanda navo. Kwaizove kusave nehanya kwandiri kuti ndiite kuti vanyurure pasocial media zano yakapihwa kuti vanga vasina kuburitsa basa rese ravaitoita.
Wese munhu anogara achimanikidza vashambadziri kuti vaite chimwe chinhu chitsva, chakasiyana, chinonakidza, nezvimwe ... asi pasina hwaro hwakakura hwekuvakira pamusoro, zvese kutambisa nguva nemari. Chii chauri kushanda pane chausingafanire kuva?
Gumiguru 5, 2011 na6: 41 PM
Doug, yakanaka posvo. Ingoziva kuziva zvauri kushandisa kugadzira izvi zvinosanganiswa kubva kukopa uye kunama mumablog ako:
Ie Kopa / unama "Chii chauri kushandira chausingafanire kuva?"
-> Verenga zvimwe: https://martech.zone/marketing/seriously-why-are-you/#ixzz1ZwreWPmh ”
Gumiguru 5, 2011 na6: 46 PM
Ichokwadi inoteedzera kuti vanhu vangani vari kuita iyo kopi uye, kana vakashandisa chinongedzo chakapihwa, inokuzivisa iwe kuti vakadzokera kune yako saiti kuburikidza nekopi yakanyorwa! Zvinhu zvakanaka!